TURKI CASRI AH AYAA KA GUDUBTA - BEERAHA DIGAAGA
Liiska xayawaanka hadda jira ayaa ka gudbaya
Dad badani waxay jecel yihiin hilibka doofaarka ee dhadhanka, nafaqada iyo nafaqada yar-yar, taasina waxay kicisaa guryaha digaaga si ay u bilaabaan noocyada qaar ka mid ah turkiga ee qoysaskooda kuwaas oo siin doona hilib caafimaad iyo mid cunto ah qoyska. Waxaa jira noocyo turkiga oo leh heer sare oo wax soo saarka ukunta ah, waxay macno u tahay in ay helaan dadka doonaya inay helaan maalin kasta ukunta qoyan. Ka dib markii beerta hilibka doofaarka ah ee loo yaqaan 'chicken poultry' ayaa go'aansaday in uu jiido digaag weyn, wuxuu leeyahay su'aal macquul ah - sida loo doorto turkiga oo leh sifooyin wanaagsan iyo xaalado gaar ah oo guryo ah, sababtoo ah qof kasta wuu ogyahay in Turkiga uu aad u baahan yahay inuu daryeelo.
Hawlgabka si loo wanaajiyo nooc ka mid ah turkika ama mid kale ayaa ku lug leh qeexidda xariiqyada dhalinyarada sida ay u kala duwan yihiin sifooyin gaar ah - culeyska ba'an ee baqtiga, wax soo saarida ukunta, caqliga labadaba mid ama dhowr nooc. Kadibna Saaxiibayaashu waxay ka gudbaan dhowr khadadood oo waalid iyo carruurtooda, iyo sidoo kale isbeddelada guuleysta, taas oo ka dhalatay taas oo ah inay helaan iskutallaabta oo leh sifooyin gaar ah.
Maqaalkani waxa aanu ku ogaan doonaa turki ugu caansan ee Turkiga, aqoonta taas oo gacan ka geysan doonta in la go'aamiyo xulashada digaaga loogu talagalay taranta gudaha ama warshadaha.
Ma taqaanaa? Turjumidda iskutallaabtu waxay isku daraysaa sifooyinka ugu wanaagsan ee khadadka waalidka.
Turka xabbadda "Kharkov-56"
Turjumidda "Kharkiv-56" waxaa loola jeedaa nooca dhexe, oo ku saleysan saldhigga machadka digaaga ee NAAS, oo hadda ku sii shaqeynaya xoolaha taranka. Shimbirta dal-ku-galka wadankan waxaa loo qaabeeyey socodka waxayna si fiican u habboon tahay ilaalinta dhib la'aanta ah iyo quudinta deegaanka. 13 toddobaad kadib, miisaanka nool ee shimbirku waa 2-2.5 kg, 17 toddobaad - 2.5-2.7 kg, 20 toddobaad - 2.8 - 3.2 kg, halka qaybta ka soo gasha qashinka ay gaari karto 85 %
Dumarka qaangaarka ah ayaa miisaankoodu noqon karaa 20 kg, iyo dhedig - 10. Digaaga turkiga wuxuu bilaabmaa qiyaastii 8 bilood, sidaas darteed, 6 bilood jir, shimbiraha waa in la doortaa tayada aad rabto inaad aragtid carruurtooda - miisaanka, qaabka jirka, iyo kuwa kale. Laga bilaabo 4 bilood jir, waxaa lagu talinayaa in la kala saaro ragga ragga si looga fogaado dhibaataynta iyo dhaawaca dambe. Turki-ka Kharkiv-56 ee isweydaarsiga intaad u baahan tahay caawimaad - waxaad u baahan tahay inaad u baahato turjubaanka oo aad gashid dheddigga baalasha hoosteeda illaa inta geedi socodku dhamaado.
Turjunka Turka "BIG-5"
Turjumayaasha turkiga "BIG-5" waxay ka yimaadaan England, laga bilaabo halka ay bilowday inay ku faafto meel kasta. Tani nooc ka mid ah turkey dhexdhexaad ah leh tayada hilibka wanaagsan si rasmi ah u diiwaan gashan 2008 Shimbiraha iskutallaabta leh jirka jirka oo dheer, xabadka ballaadhan, dibnaha dhabarka iyo garabka iyo lugaha. Boorashka waa caddaan. Miisaanka dheddiggu waa qiyaastii 10-11 kg, ragga - 17-19 kg. Miisaanka 16-toddobaadlaha ah ee da'da yaryar ah wuxuu gaari karaa 7 kg oo leh cunto dheellitiran.
Turjumooyinka turkiga "BIG-6" waxaa loola jeedaa nooca culus, waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee shimbiraha gudaha ee loogu talogalay dhalashada iyo sifooyinka wanaagsan.
Noocyadaas waxaa la soo saaray 2008 oo ay soo saareen caanaha Ingiriisiga ah. Turkiga "BIG-6" wuxuu leeyahay muuqaal cufan leh lafo xoog leh, xabad fareesho ah. Kaararka ayaa caddaan leh marmar marmar ah oo madow ah oo ku yaal laabta. Dumarku waxay dhigi karaan ukun 110-120 hal sano. Turjubaanka ragga waaweyn "BIG-6" oo culeyskiisu yahay 20-23 kg, haweeneyda - 10-13 kg. Qeybta soo-saarka xoolaha waxay gaari kartaa 80-85%.
Miisaanka 12-toddobaadlaha ah ee da'da yaryar wuxuu gaari karaa 13-15 kg. Noocyada shimbiraha ayaa ah mid aan la qabsan karin beerashada, sidoo kale waxay ku kala duwan tahay miisaan aad u culus oo kharash yar oo hooseeya, taas oo "BIG-6" ay aad ugu badan tahay beeralayda digaaga.
Turjumooyinka turkiga "BIG-9" waxaa loola jeedaa nooca culus, oo ah waxyaabaha aan laga adkaan karin. Kala duwanaantu waxay siisaa faa'iido wanaagsan miisaanka nool, marka la barbardhigo quudinta la isticmaalo ee turkey. Xirmadu waxay caan ku tahay dulqaad, waxqabadka wanaagsan iyo sifooyinka wanaagsan ee hilibka.
Jidhka noocyada turkika ah ee turkeygu waa cufan, lugaha ayaa gaaban, feedhaha waa miisaan, madaxiisu yartahay waa dhererka dhererka qoorta. Boorashka waa caddaan. Miisaanka qof weyn oo lab ah ayaa qiyaastii 18-21 kg, dhedig 10-11 kg. Wixii 26 asbuuc ah, haweenku waxay awood u leedahay in ay qaadato qiyaastii 120 ukumood, hatchability taas oo ah 85%, taas oo kuu ogolaaneysa inaad si guul ah u soo saarto iskutallaabtan ku taal guriga. Waxay ka timaadaa "BIG-9" waxay dhacdaa dhowr saf oo turkiga ah, kuwaas oo soo saaraya caanaha.
Waa muhiim! Mudada ugu wanaagsan ee koritaanka iskutallaabtu waa 20-22 asbuuc, dayactir dheeraad ah waxay u baahan doontaa kharashka sii kordhaya, iyo culeyska kordhay ka dib da'daani waxay noqotaa mid aan muhiim ahayn.
Turjunka Turka "BJT-8"
Isgoysyada "BJT-8" - nooc dhexdhexaad ah, dabeecadda taas oo lagu gartey qadarin iyo qiyaas culus oo miisaanka nool. "BYT-8" waxaa lagu bilaabay England, taariikhda diiwaangelinta iskutallaabta - 2007.
Muuqaalku waa mid gaar ah - jidhku waa mid ballaadhan, qaab wareegsan, madaxu waa mid ballaadhan oo ballaaran. Lugaha dhaadheer oo dhexdhexaad ah oo kala duwan, feeraha si fiican loo horumariyey. Qoorta waa yar yahay dunta, dherer dhexdhexaad ah. Xuubka cad, koritaanka madaxa ee guduudan casaan. Turkiga 20-todobaad ah oo miisaankiisu yahay 17 kg, turkey - 9 kg. Waxay macno u leedahay in la gowraco shimbir, da'doodu tahay 14-17 toddobaad, kharashka sii-haynta dheeraadka ah aad ayuu uga badan yahay kororka miisaanka nool.
Turjumidda Turkiga "Universal"
Iskuday "Universal" waxaa loola jeedaa nooca nalka. Iskutallaabtu waxay soo saartay jinsiyado Ruush ah oo si rasmi ah u diiwaangashaday 2003. Miisaanka nin weyn wuxuu gaaraa 16 kg, dhedig - 9 kg.
Shimbirta noocyadani waxay leedahay jirka cufan, lugaha dheeraha leh iyo baalashyada, xabadka iyo xabadka. Xajka cad. Wax soo saarka ukunta waa qiyaastii 65 ukumood sanadkiiba, ilaa 90% kaas oo la bacrimiyo. Soo saarka kaydka dhalinyarada ee heerka 95%. "Universal" ayaa caan ku ah taranka lo'da sababtoo ah wax ku oolnimada iyo fududaanta nuujinta, inkastoo miisaanka hoose ee shimbiraha qaangaarka ah iyo heerarka hooseeya ee kororka miisaanka jirka.
Xayawaanka Turkiga "Khidon"
Turjumayaasha "Khidon" waxa loola jeedaa noocyada culus. Noocaankan waxaa laga soo saaray Netherlands, laga bilaabo qaybinta dhulalka kale ee laga bilaabo 1980-yadii. Cross waxay leedahay heer wanaagsan oo roon. Miisaanka qof weyn 30-todobaad jir ah waa 19-20 kg, iyo dumarka waa 10-11 kg.
Wax soo saarka ukunta heerkiisu yahay 100-110 goood sanadkiiba. Qaybta wax soo saarka qashinka waa ilaa 80%. Dhibaatooyinka ka yimaada isu-tallaabidda waxaa ka mid ah dhibaatada taranta iyo korinta saamiyada dhalinyarada, taas oo aan u dulqaadanayn qoyaanka, diyaarinta, isbedelka heerkulka iyo waxay ubaahantahay daryeel caafimaad oo joogto ah, iyo sidoo kale kakanaanta bacriminta dabiiciga ah iyo baahida loo qabo dabiiciga. Iskutallaabtan laguma talinayo in lagu beero beeralayda cusub ee digaaga.
Ma taqaanaa? Turjubaanka socda ayaa badbaadin kara qiimaha cuntada ilaa nus.
Turka Turka "Victoria"
Turka iskutallaabta ah "Victoria" ayaa loola jeedaa nooca nalalka ah ee ku haboon koritaanka qoysaska iyo baqashada beeraha digaaga. Miisaanka wiilka qaangaarka ah wuxuu gaaraa 12 kg, dheddig - 7-8 kg. Jidhku si fiican ayuu u dhistay, xitaa feeraha oo si fiican loo xannibay, wuxuu leeyahay heer koritaan degdeg ah. Wax soo saarka ukunta - qiyaastii 80-90 ukumood oo leh bacrimin wanaagsan, dhalidda xoolaha yar yar ee isticmaalaya naqshad waa ilaa 75%. Turjubaannada yaryar ee "Victoria" waxay leeyihiin heer nololeed oo wanaagsan, luminta turulisyada turjubaanka ah ayaa gaari kara 10%. Awooda noocyada shimbirta ayaa sidoo kale ah dulqaad, dareen la'aan oo ku jirta cuntada iyo xaaladaha xabsiyada.